Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် အပ်စမ်းရေ ထုတ်လုပ်သူနှင့် အပ်စမ်းရေ ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ကျွန်တော်တို့သည်ထောက်ပံ့ရေးထုတ်လုပ်နှင့်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲကျယ်ပြန့်သို့တင်ပို့ အပ်စမ်းရေ စက်ရုံအတွက်နှင့်အတူ Taiwan ထိုထုတ်ကုန်လည်းဖောက်သည်များနှင့်ကမ္ဘာ၏ clients များကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထောင်အသောင်းရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များအတိုင်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကဤ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောသဗေဒနှင့်တာရှည်ခံအိတ်ထိကပေါက်နှင့်ခါးပတ်ထိကပေါက်၏ရာတွင်, အသင့်တော်ဆုံးပစ္စည်းများ, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ, ပန်းကန်ကိုအသုံးပြုပါ။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောနှုန်းထားများဖြင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်စိတ်ကျေနပ်စရာတွေ့လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်အတွက်စိတ်ဝင်စားသို့မဟုတ်သင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကလွတ်လပ်စွာကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - Beryllium-Copper Probe Needles
ဘီရီလီယမ်ဒြပ်စင်သည်ဇိမ်ကျသောသတ္တုဖြစ်သည်,ဂဟေနှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သောအလွိုင်း,အရာမဟုတ်သောကိုဆီးတားနိုင်-ထိုကဲ့သို့သော Hydrochloric acid နှင့်ကာဗွန်အက်ဆစ်အဖြစ်အက်ဆစ်ဓာတ်တိုး.၎င်းသည်ပလပ်စတစ်ပြိုကွဲခြင်းကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်,ခံနိုင်ရည်ရှိသည်,နှင့်ခြစ်ရာခုခံ.ဖြည့်စွက်ကာ,Beryllium ကြေးနီကိုအပူကုသမှုဖြင့်တိုးတက်စေနိုင်သည်.ခွန်အားနှင့်၎င်း၏ခိုင်မာခြင်းနှင့်စီးကူး.
ဘီရီလီယမ်၏ကြေးနီစမ်းစစ်ခြင်းများသည်ကုန်ကျစရိတ်လည်းရှိသည်-ကောင်းမွန်သောစီးကူးမှုနှင့်အနိမ့်ပါးပါးပြားများပျက်စီးခြင်းအတွက်အရေးကြီးသော application များအတွက်ထိရောက်သောရွေးချယ်မှု.
ဘယ်ရီလီယမ်ကြေးနီသတ္တုတွင်း၏အစွန်အဖျားသည်ရွှေရောင်အဝါရောင်ဖြစ်သည်,နှင့် Berillium ကြေးနီစုံစမ်းစစ်ဆေးအားလုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးအမျိုးအစားများတို့တွင်အအအရှိဆုံး soft ဖြစ်ပါတယ်.ယေဘုယျအားဖြင့်ရောင်းချသည်မှာလျှပ်စစ်မဲ့အရောင်ဖြစ်သည်,အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးဓာတ်တိုးလွယ်ကူသည်နှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့မလွယ်ကူကူသည်,မူရင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး electropolished ဖြစ်ပါတယ်,ဓာတ်တိုးရန်မလွယ်ကူခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်,နှင့် impedance တည်ငြိမ်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/needle-probes.html
အပ်စမ်းရေ ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ အပ်စမ်းရေ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ အပ်စမ်းရေ ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan
ပယ်လေဒီယမ်အလွိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး features တွေ: အသစ်သောအဖိုးတန်သတ္တုပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသုံးပါ. LED wafer factory test သည်အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်အလင်းကိုအစက်အပြောက်စမ်းသပ်ရန်ပိုမိုသင့်တော်သည်,မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အသက်ရှည်အတူ. အပ်အစွန်အဖျားကိုပုံသွင်း။ ဆေးကြောထားသည်,နှင့်အပ်အစွန်အဖျားထောင့်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. ထိုင်ဝမ်’ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးသည်တည်ငြိမ်သည်,စျေးနှုန်းအရှိဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်,၎င်းသည် LED စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အထူးတီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်.
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကဒ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကတ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းနှင့်စမ်းသပ်သူအကြားဆက်သွယ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်၊ သို့ဖြင့်ဆားကစ်ဘုတ်ကိုအမှန်တကယ်စစ်ဆေးရန်အတွက်စစ်ဆေးနိုင်သည်။.စုံစမ်းစစ်ဆေးသုံးပါ:၎င်းသည်စုံစမ်းမှုကဒ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်.သီးခြားစမ်းသပ်မှုများသည်မြင့်မားသောအရာများကိုသီးခြားခွဲထုတ်ရန်အတွက်လျှပ်စစ်အချက်ပြချက်များကို chip pads သို့ပို့ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-ချွတ်ယွင်းထုတ်ကုန်များမှအရည်အသွေးထုတ်ကုန်. ပစ္စည်း:Tungsten(WNP),ရီနီယမ်အဖြိုက်နက်(WRNP),P4,P7,ဘီစီ သတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖောက်သည်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်နမူနာအရသိရသည်လုပ်နိုင်ပါတယ် တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့ မူရင်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ:အမေရိကန် ပြုပြင်ရာအရပ်:ထိုင်ဝမ်
အဖြိုက်နက်ကိုအပ်များကိုပတ်ပတ်လည်လှံတံအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်-ပုံသဏ္tာန်အရ tungsten ဆေးထိုးအပ်များနှင့်ပြတ်သော tungsten ဆေးထိုးအပ်များကိုပုံသဏ္accordingာန်အရသိရသည်.လှံတံ-ပုံသွင်းထားသော Tungsten အပ်အပ်သည်ပါးလွှာသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သတ္တုမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိသည်.argon arc ဂဟေလျှပ်ကူးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်.Argon arc welding technology သည်မြန်ဆန်စွာကြီးထွားလာပြီးအများအားဖြင့်အိမ်တွင်းနှင့်ပြည်ပ၌ဂဟေဆော်သောနည်းပညာဖြစ်သည်.အထူးသဖြင့်,manual argon tungsten arc welding သည်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုကိုယ်ထည်များအားဂဟေဆော်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်.ဂဟေဆော်နေစဉ်,tungsten electrode နှင့် workpiece အကြား arc ကို arc ထုတ်လုပ်သည်,နှင့် Filler သတ္တုတစ်ဖက်ကနေတိုက်ကျွေးသည်.အဆိုပါ arc အပူ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအောက်မှာ,Filler သတ္တုနှင့် workpiece သည်ဂဟေဆော်ရန်အတူတကွအရည်ပျော်သွားသည်.လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်,ဂဟေလက်ရှိလွန်းမဖြစ်သင့်.ထို့ကြောင့်,tungsten argon arc welding သည်များသောအားဖြင့် ၄ မီလီမီတာအောက်ရှိပါးလွှာသောသံမဏိပြားများအားဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သည်,ထိုကဲ့သို့သောပိုက်တင်းပါးအဆစ်အဖြစ်,ပိုက်နှင့်ပြွန်ပန်းကန်ဆက်သွယ်မှု.ချွန်ထက်သောအစွန်အဖျားရှိအဖြိုက်နက်များကိုအဓိကအားဖြင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်အသုံးပြုသည်,ထိုကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်လေးအဖြစ်-စုံစမ်းစစ်ဆေးစမ်းသပ်သူ,အရာ multi ကိုဖြစ်ပါတယ်-လေးသုံးပြီးရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံတိုင်းတာခြင်း device ကို-စုံစမ်းစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်းနိယာမ.ဒီတူရိယာကို National Crystal Silicon များအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုနည်းစနစ်များနှင့် American A ကိုရည်ညွှန်းသည်.S.တီ.M စံသတ်မှတ်ချက်.၎င်းသည်ခုခံမှုနှင့်စာရွက်ခုခံမှုကိုစမ်းသပ်ရန်အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်(စာရွက်ခုခံ)Semiconductor ပစ္စည်းများဖြစ်သည်.Tungsten ဆေးထိုးအပ်များကို semiconductor material factory များတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်,ဆီမီးကွန်ဒတ်တာစက်ရုံစက်ရုံများ,သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ,နှင့်တက္ကသိုလ်များသည် semiconductor ပစ္စည်းများ၏ခုခံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်.